Tattoo afrikada: qabyaalad macno leh | Tattoo
Tattoo afrikaanka: qabyaalad macno leh
ka xaraashka Afrikaanka, halka Tattoo sawiroTusaale ahaan, iyagu waa mid ka mid ah tusaalooyinkii ugu horreeyay ee ku dhaqanka tabinta. Xaqiiqda ah in qabiilooyinka qaar qaaradani ay ku sugan yihiin xaalad la mid ah tii kumanaan sano ka hor waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan aragno hanaan dhaqameed dhaqameed ah oo aanan si kale u arki karin.
Marka, haddii aad xiiseyneyso tattoos-ka Afrika, sii wad aqrinta, sida maqaalkan waxaan ku arki doonnaa habka. si loo abuuro mid ka mid ah astaantan, oo aad uga duwan meelaha kale ee adduunka.
1 Micnaha taatikada Afrika
2 Habka loo maro tattoo: nabar
Micnaha taatikada Afrika
Tattoos-ka noocan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo carruurta marka ay gaaraan ragga (dumarka ku yar yahay). Micnaha tattoo, sababtoo ah xanuunka iyo dhibaatada xun ee ay leedahay, waxay la xiriirtaa xaqiiqda bislaanshaha, inaad diyaar u ahaato u adkaysiga xanuunka la imanaya nolosha.
Dhinaca kale, Tattoo-ga ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa sifo soo jiidasho leh oo muujinaya xoog iyo xoog.
Habka loo maro tattoo: nabar
Sida aad ugu badan tahay Afrika, maqaarka madow ee dadka deggan ayaa ka dhigaya wax aan macquul ahayn in la yeesho tattoo "qabta" midabka. Taasi waa sababta ugu caansan ay tahay in la sameeyo nashqado ka tagaya nabarro, oo loo yaqaanno nabarro.
Kala-saariddu waa geedi socod aad u xanuun badan oo, marka loo eego sawirro badan oo afrikaan ah, ay ka kooban yihiin jarista ama gubidda maqaarka si xitaa marka bogsiintu u sii socoto maqaarka iyo naqshadeynta sawirka lama lumin doono. Oo markay ka hadlayaan nashqadaha, waxay ahaayeen kuwo aad u murugsan ama fudud, oo cad macno badan oo kala duwan.
Taariikhda tattoo-yada Afrika waa mid aad u xiiso badan, sax? Noo sheeg, ma leedahay wax sawir ah oo sidan oo kale ah? Xusuusnow inaad noosheegi karto waxaad rabto hadaad nooga tagto faallooyin!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Qabiil » Tattoo afrikaanka: qabyaalad macno leh
Alanna Masterson waxay soo bandhigtay tattoo cusub, oo aad u muuqda!
Tattoo-ka cadceedda, moodada halista ah ee caafimaadka gelinaysa khatar weyn